January 2019 - Page 3 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
[ February 16, 2020 ] Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland oo ku edeeyay DFS in ay qorsheynayso in ay ciidamo geyso gobolka	Puntland
[ February 15, 2020 ] Taliye saldhig booliis oo lagu dhaawacay magaalada Boosaaso	Puntland
[ February 15, 2020 ] IMF, World Bank move pushes Somalia closer to debt forgiveness	English News
[ February 13, 2020 ] Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Boosaaso ku qaabilay taliyaha Taliska Mareykanka ee Afrika	Puntland
[ February 13, 2020 ] Mareykanka oo liiska argagixisada ka saaray shirkada Al Barakaat	Somalia
January 20, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn ay Sabtidii ka geysteen gudaha Soomaaliya ku dilay 52 dagaalyahan kuwaasoo subaxnimadii hore ee isla Sabtida weeraray saldhig ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya, sida ay sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika […]
January 19, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa fashiliyay qarax, sida ay sheegeen masuuliyiintu. Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo loo yaqaan Dhedo oo shir saxaafadeed ka hadlayay maanta oo Sabti ah ayaa […]
Al-Shabaab oo caaruur ka badan 100 ka afduubatay gobolka Bakool
January 18, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa gobolka Bakool ka afduubatay caruur ka badan 100 oo kunoolaa halkaas. Guddoomiye ku xigeenka maamulka degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool Cali Cabdinuur Iimaan ayaa warbaahinta u sheegay in Al-Shabaab ay […]
January 17, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qatar ayaa 68 gaari oo gaashaaman ugu deeqday Soomaaliya maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegtay Wasaaradda Gaashaandhiga Qatar. Qatar ayaa sheegtay baabuurta oo maanta oo Khamiis ah laga dajiyay Muqdisho ay gacan […]
Deni oo hakiyay dhammaan heshiisyada dowladda inta laga soo dhisayo golaha cusub ee wasiirada
January 16, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray amar lagu hakinayo heshiisyada cusub ee dhammaan dowladda, barnaamijyada, iyo shaqaalaysiinta ilaa inta laga soo dhisayo golaha cusub oo wasiirada. Tan iyo doorashadii […]
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dhammaan nimankii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday huteel kuyaala Nairobi la dilay lana soo afjaray 19-saacadood oo ay haysteen. Hadal uu taleefishinka qaranka ka jeediyay, […]
Huteel kuyaala magaalada Nairobi oo weerar lagu qaaday
January 15, 2019 Puntland Mirror 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Huteel kuyaala caasimada dalka Kenya ee Nairobi ayaa weerar lagu qaaday galabta oo Talaado ah. Ugu yaraan labo qarax iyo rasaas ayaa laga maqlay xarun kutaala degmada Westland ee magaalada Nairobi, halkaas oo […]
Madaxweynaha Puntland oo kulan la yeeshay wefdi ka socda shirkadaha Shiinaha ee Afrika
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah wefdi ka socda shirkadaha Shiinaha ee Afrika kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada. Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada, kulanka ayaa […]
Madaxweynaha Puntand oo joojiyay daabacaada lacagta Shillin Soomaaliga
January 14, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa joojiyay daabacaada Shillin Soomaaliga, sida lagu sheegay digreeto maanta oo Isniin ah soo baxday. Dowladdii Cabdiweli Maxamed Cali ayaa lagu eedayn jiray daabacaada lacagta Shillin […]
Madaxweynaha cusub ee Puntand oo xafiiska la wareegay
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa maanta oo Isniin ah si rasmi ah xafiiska u la wareegay, asbuuc kadib markii uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha. Munaasabada xil-wareejinta madaxweynaha oo ka dhacday […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan ciidanka booliiska Puntland ee gobolka Bari ayaa lagu dhaawacay magaalada Boosaaso, sida bog wareedka Puntland Mirror ay u sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan. Niman baastooladu ku hubeysan ayaa Cumar Warsame Ciise [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Khamiis ah xafiiskiisa Boosaaso ku qaabilay taliyaha Taliska Mareykanka ee Afrika Janaraal Stephen Townsend. Madaxweynaha iyo taliyaha ayaa ka wadahadlay amaanka, la dagaalanka argagixisada [...]
Washington-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa liiska argagixisada ka saaray shirkada Al Barakaat, sida lagu sheegay bayaan Arbacadii ka soo baxay xafiiska khasnada Mareykanka. Shirkada ayaa liiska lagu daray sanadkii 2001 kadib weerarkii September 11 ee ka [...]
Puntland security forces captured magician in Bosaso port town
Bosaso-(Puntland Mirror) Puntland security forces have captured magician in Bosaso port town of Bari region. Speaking to media, Bosaso police commander Colonel Yousuf Ahmed said the magician was in the town for more than 25 [...]
Puntland oo kasoo horjeesatay go’aanka dowlada federaalka Soomaaliya ku joojisay qaadka Miirowga ee ka yimaada Kenya
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowlada Puntland ayaa si rasmiya uga soo horjeesatay go’aanka dowlada federaalka Soomaaliya ku joojisay qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya. Afhayeenka dowlada Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac “Quraan-jacel” oo la hadlay idaacada maxaliga ah [...]